Jesús Maeso de la Torre: «Iri ibasa uye mamesi haapo» | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: Jesús Maeso de la Torre. Facebook nhoroondo.
Jesu Maeso de la Torre Iyo ndeimwe yeangu makuru enhoroondo enhoroondo mareferensi. Nhoroondo yake yekutanga, Dombo remagumoNdakafadzwa nazvo uye ndakazvitevera nekuzvipira kubva ipapo. Gare gare kwakauya mazita akadai se, pakati pevamwe, Comanche, Bhokisi reChinese, Muranda weManila, Misodzi yaJulius Caesar. Yekupedzisira ndeye oleum.
Nhasi ndipei izvi indavhiyu , que Ndinokutendai zvikuru nekuda kwemutsa wavo, kuzvipira uye nguva. Isa iyo colophon kune dzino dzakateedzana nezvevanyori veSpanish venhoroondo genre.
KUKURUKURA NAJESÚS MAESO DE LA TORRE
JESÚS MAESO DE LA TORRE: Bhuku rekutanga randakaverenga, iro rakanga risiri TBO, raive Mumongi weYuste monastery, pamusoro Juan anobva kuAustria —Jeromín— namambo Carlos V. Munyori waro aive Leandro Herrero uye yakaratidza zvandinoda zvekunyora.
Nyaya yekutanga yandakanyora, yakazogadziriswa naEduhasa, yaive Dombo Rekufanirwa, pahondo yamambo yeScots Robert bruce kuumambo hweNasrid weGranada.
JMT: Pave nemazhinji, asi wandinorangarira kunyanya ndiye Bomarzo, kubva mundiro Manuel Mujica Laínez, Iyo kunze kwekurondedzera nyaya yemutongi weItaly Renaissance, chirevo chake, chizere nehunhu, runako, mimhanzi uye chishuwo, inyaya yakajeka yebudiriro yeEuropean, iyo yaanodzidzisa kunyora.
Kufanana nemabhuku, kune vanyori vazhinji vanondifadza: John Willians, Vargas Llosa, Blasco Ibáñez, Tom Holand, Juan Eslava, Philipp Meyer naEmilio Lara. Kuverenga nyaya dzavo kunondizorodza uye kunondiendesa kumafungidziro epasirese anondinunura kubva kune grey chokwadi.
Handina kukahadzika: Kunetseka George weBurgos, anoremekedzwa kuraibhurari ye Zita rerosi. Uye zvakare John Sirivha, pirate kaputeni we Pfuma chitsuwa.
Kwete kunyanya, asi Ini ndinowanzo gadzira tafura pamberi uye woisa zvimwe mumhanzi wepamberi, chero maitiro acho, kunyangwe ndichifarira iyo classical kana polyphonic.
Nguva dzose mumba mangu (Ini handitume, nekuti ini handitenge chero chinhu), iyo yandinayo izere nemabhuku, yekunyorera midziyo uye mazana ematepi, madisc uye maCD enguva dzese. Ini chete ndinofara. Iyo nguva, chero munhu. Iri ibasa uye hapana musasi, chete basa, kuzvipira uye kuda zvinyorwa.
Nekuda kwekudzidziswa kwangu kwechinyakare, vese vatinoona sezvakakosha uye vakandibatsira kudzidza. Ndoreva: Iyo Lazillo de Tormes, Quevedo, Gongora, Garcilaso, lope, Cervantes kana Rojas, pasina kukanganwa zvekare zvekare Homer, Virgilio, Horacio kana Isidoro anobva kuSeville.
Pasina mubvunzo iyo nhema nhema, iyo yandinowanzo sanganisira munhaurwa dzangu, uye iyo theatre vemazera ese. Ini ndinodawo iyo ngano nhoroondo.
Ndiri kupedzisa Stoner, naJohn Willians. Inonakidza kwazvo uye gritty nezve purofesa weyunivhesiti muUSA.
Ndiri kushanda nyaya yakaiswa muhumambo hweByzantine, umo zvakafanira kuvaka yakadzika nhoroondo yezvinocherwa mumatongo.
Ini ndinofungidzira, neruremekedzo rwakafanira kune avo vanonyora, izvo kuzvininipisa kwakarasika yeiyo itch yekuvimbisa shamwari dzake kuti anyora bhuku, uye vanokanda chero chinhu. Ini ndakamirira kusvikira ndave nemakore makumi mana ekuberekwa kuti ndive neiyo kukwana zvakakwana kunyora, uye nguva dzose neruremekedzo rusingataurike kutsikisa. Vaparidzi dzimwe nguva vanotepfenyura, vachiedza kutsvaga chakanakisa mutengesi, uye vanoburitsa mabhuku anoshoreka, nevanyori vavanenge vasina kuverenga.
Zvirinani ndakapora nguva ye nakidzwa nekunakidzwa kwangu kukuru: kuverenga, uye ndasara ne gadzirira mishonga mitsva zvinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Jesús Maeso de la Torre: "Iri ibasa uye masi havapo"
Iyo yekuchengetedza dutu